Ezweni lanamuhla kukhula ngokushesha ngendlela emangalisayo, ngokuvamile yathuthuka omkhulu. Futhi sikhuluma hhayi kuphela mayelana entuthukweni yezobuchwepheshe noma zobuchwepheshe, nakuba lezi zici, ekugcineni, wadlala indima enkulu. Ingqikithi inqubo Ukukhululwa, isifiso sabesifazane emkhakheni wokuphila, okuyinto ekuqaleni eyenzelwe abamele nengxenye enamandla. Kodwa kulokhu kuqhubeka ukuthi yinhle yini noma cha nhlobo sokuthuthukiswa obunobunye wesintu, futhi impumelelo engahle ibe khona nengxenye ababuthakathaka mkhakha eziyinselele.
Kunzima ukucabanga ngisho esikhathini esidlule yamuva, owesifazane ukudlala poker (kuba Yiqiniso, akukho mayelana amakhadi nhlobo), ngoba kwakuhambisana nezinga iningi yokudlela namabala nezinye izikhungo ezifanele. Kodwa kulezi zinsuku lolu hlobo umdlalo ikhadi isibe ezingabizi hhayi kuphela, kodwa futhi waqaphela njengoba umdlalo. Ukuqoqa poker esandleni eTexas Hold'em manje nethuba bonke abantu abanentshisekelo kule izimo ezikahle kakhulu lokhu, ezihlanganisa i-Internet. Abayona ngaphandle futhi abesifazane. Ngaphezu kwalokho, njengoba umkhuba imibukiso, stud imithetho poker, zifunda kuneNingizimu amadoda Countdown kuqale umdlalo. Kumele wakhumbula ukuthi iningi, indawo enkulu, ukuqala ukudlala Texas Hold'em. Kuvele iqiniso elithakazelisayo, yebo, kuthathwa ngokuthi kule poker emihlanu ikhadi, imithetho zazo nzima kakhulu, wobulili buthaka udlala ngokuvamile, amadoda yimpumelelo. Futhi njengoba kungase kubonakale ekuqaleni lingalingani, banikezwe ingxenye ezingokomzwelo nezingokwengqondo we okushiwo umdlalo, Texas Hold'em poker esandleni bengabesinye lesezingeni lelisetulu.
Kuyini we ekuqaleni kubhekwe impumelelo nakuba abesifazane etafuleni poker? Ekuqaleni, lapho kukhona khona ababili. Bafika phansi, ukukhuluma isandla, imizwelo engokwemvelo eziyisisekelo: owokuqala - kwabesifazane, kwesibili - ngokulandelana, ngoba amadoda. Njengoba yaziwa, ngesisekelo izisekelo umdlalo kunoma yiziphi izinhlobo poker kuyinto logic lensimbi nangomthofu, okubaluleke kakhulu, ikhono Bluff. Ngokuvamile izinga yokugcina kubalulekile kuneyokuqala futhi bonke abanye, kuhlanganise ukubala zezibalo. Futhi ozimisele siphikise Axiom ukuthi abesifazane ngaphezulu ezifaneleke ukwethula abanye benza amaphutha, ukufinyelela sizibeka imigomo. Kucatshangwa ngakho konke lokhu inhlanganisela poker Texas Hold'em, ngokuvamile ukudlala indima yesibili.
Manje okuncane mayelana amadoda. ubuthaka babo main uma udlala nowesifazane, yebo, isifiso ivelele, singabonisa isibindi sakho, ngokwezinga elithile, ukungakhathali. Kuyacaca ukuthi ukudlala poker emihlanu ikhadi, imithetho okukuvumela ukudlala okusheshayo, owesifazane angase abe inzuzo phezu indoda ehlezi eduze. Nokho, konke lokhu inenani icala elilodwa kuphela, uma abantu bayadlala, njengoba besho, ukuze siphile, okungukuthi, ahlale ndawonye etafuleni elifanayo futhi ungabona amehlo nomunye. Isici elilandelayo okufanele kucatshangelwe, imi kanje: kukhona izinhlobo ezimbili abesifazane okunemibandela abazinika isikhathi poker. Abokuqala kuleli mdlalo ngenxa yelukuluku, ngenxa isithakazelo eziwubala. Yiqiniso, silindele ukuba yimpumelelo enkulu akwenzi mqondo, ngoba ukugxila hhayi kakhulu umphumela kodwa inqubo. Enye uhlobo abesifazane ukutadisha stud imithetho poker, ngenhloso ifeze yabo ethize kanye nemiphumela. Kuyinto lezi zintokazi pragmatic futhi ujabulele ngokugcwele ukuzigabisa (ngokuvamile ukuqubuka) amadoda, ngaleyo ndlela kwande amathuba abo.
Izwe, yebo, kukhona yonke emthaleni, ngaphandle ihaba, abesifazane kakhulu bani poker esandleni Texas Hold'em ziyisisekelo ukuphila, okungenani okhokhelwayo. Phakathi abamele isikhala okuthiwa post-Soviet bungabonakala lika Gerasimova ngenhlanhla inkosi ezemidlalo kokusazolungiswa.
Ukwakhiwa kophahla. Uphahla eyenziwe ibhodi lukathayela
Incazelo kanye nezinhlobo Ukuhwebelana